မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အိန္ဒိယစစ်တပ် ပူးတွဲပြီး အေအေ ကို တိုက်ခိုက်...! - Thadin
HomeNEWSမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အိန္ဒိယစစ်တပ် ပူးတွဲပြီး အေအေ ကို တိုက်ခိုက်…!
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အိန္ဒိယစစ်တပ် ပူးတွဲပြီး အေအေ ကို တိုက်ခိုက်…!
March 16, 2019 Admin Kwee NEWS Comments Off on မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အိန္ဒိယစစ်တပ် ပူးတွဲပြီး အေအေ ကို တိုက်ခိုက်…!
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ကနေ မတ်လ ၂ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ နဲ့ အိန္ဒိယ စစ်တပ်တို့ ပူးတွဲပြီး ရခိုင့်တပ်မတော် AA ကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြတယ်လို့ အိန္ဒိယ စစ်တပ်က ပြောဆိုကြောင်း India Today သတင်း က ဖော်ပြပါတယ်။
အိန္ဒိယ အနောက်ဘက် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးအပေါ် အများက အာရုံစိုက်နေကြချိန်မှာ၊ အိန္ဒိယ စစ်တပ်က အရှေ့ဘက် နယ်စပ်ဒေသမှာ ရခိုင့်တပ်မတော် AA ကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
AA ကို မြန်မာအစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတာပါ။ သတင်းတွေအရ အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ အကြီးစား ကုလားတန် စီမံကိန်း ကို AA က ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ကုလားတန် စီမံကိန်းဟာ အိန္ဒိယ ကာလ်ကတ္တားမြို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်းကို ဆက်စပ်မယ့် စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို မြန်မာ နဲ့ အိန္ဒိယ စစ်တပ်တို့ ပူးတွဲဆင်နွဲတဲ့ အကြီးစား စစ်ဆင်ရေးတွေ မှာ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင်းက အသစ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူပုန်စခန်းတွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ မြောက်ပိုင်းက NSCN (K) နာဂ သူပုန်စခန်းတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ပူးတွဲ စစ်ဆင်ရေးတွေကို သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာ ဆင်နွဲခဲ့ပြီး၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။RFA\_File Photo- မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ အေအေ တပ်စခန်း တစ်ခု ကို တွေ့ရစဉ်။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၇ ရကျနကေ့နေ မတျလ ၂ ရကျနအေ့ထိ မွနျမာ နဲ့ အိန်ဒိယ စဈတပျတို့ ပူးတှဲပွီး ရခိုငျ့တပျမတျော AA ကို တိုကျခိုကျ ခဲ့ကွတယျလို့ အိန်ဒိယ စဈတပျက ပွောဆိုကွောငျး India Today သတငျး က ဖျောပွပါတယျ။
အိန်ဒိယ အနောကျဘကျ နယျစပျဒသေ တညျငွိမျရေးအပျေါ အမြားက အာရုံစိုကျနကွေခြိနျမှာ၊ အိန်ဒိယ စဈတပျက အရှဘေ့ကျ နယျစပျဒသေမှာ ရခိုငျ့တပျမတျော AA ကို ပဈမှတျထား တိုကျခိုကျ ခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
AA ကို မွနျမာအစိုးရက အကွမျးဖကျအဖှဲ့အဖွဈ သတျမှတျ ထားတာပါ။ သတငျးတှအေရ အိန်ဒိယအစိုးရရဲ့ အကွီးစား ကုလားတနျ စီမံကိနျး ကို AA က ခွိမျးခွောကျနတေယျလို့ ဆိုပါ တယျ။ ကုလားတနျ စီမံကိနျးဟာ အိန်ဒိယ ကာလျကတ်တားမွို့နဲ့ မွနျမာနိုငျငံ စဈတှေ ဆိပျကမျးကို ဆကျစပျမယျ့ စီမံကိနျးဖွဈပါတယျ။
အခုလို မွနျမာ နဲ့ အိန်ဒိယ စဈတပျတို့ ပူးတှဲဆငျနှဲတဲ့ အကွီးစား စဈဆငျရေးတှေ မှာ ပထမအဆငျ့အနနေဲ့ မီဇိုရမျပွညျနယျတှငျးက အသဈ တညျဆောကျထားတဲ့ သူပုနျစခနျးတှကေို ပဈမှတျထား တိုကျခိုကျခဲ့တာဖွဈပွီး၊ ဒုတိယအဆငျ့အနနေဲ့ မွောကျပိုငျးက NSCN (K) နာဂ သူပုနျစခနျးတှကေို တိုကျခိုကျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ ပူးတှဲ စဈဆငျရေးတှကေို သီတငျးနှဈပတျကွာ ဆငျနှဲခဲ့ပွီး၊ မတျလ ၂ ရကျနမှေ့ာ အဆုံးသတျခဲ့ပါတယျ။RFA\_File Photo- မွနျမာနိုငျငံမွောကျပိုငျးရှိ အအေေ တပျစခနျး တဈခု ကို တှရေ့စဉျ။
အဆစ်ရောင် အဆစ်နာ အဆစ်များ ကိုက်ခြင်း ရောင်ခြင်း တင်းခြင်းတို့ကို လက်တွေ့ ပျောက်ကင်းစေသော တောရဲယို
အိမ်ပိုင် မြေပိုင် ဖြစ်လိုသူများအတွက်.. ” မြေ” ပိုင်ရှင် ” အိမ်” ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း
This Month : 40302
This Year : 235700
Total Users : 594724
Total views : 2730514